Window Screen Factory - တရုတ် Window Screen ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသောကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်ပစ္စည်း - သံမဏိအပူဖြင့်သွပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသွပ်အဖုံး: ၅၀ ဂရမ် / m2 စက်ရုံ: ဟုတ်ကဲ့အမျိုးအစား - ကယောင်ပိတ်ပြီးနောက်ယက်လုပ်ခြင်းအသွင်အပြင် - အကြမ်းခံ။ ခိုင်ခံ့သောသံချေးမခံနိုင်ခြင်း၊ ခိုင်ခံ့သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအသုံးချမှု - ဘာဘီကပ်၊ ရေနှင့်ဓာတ်ငွေ့စစ်ထုတ်ခြင်း၊ အသား၊ သံမဏိအပြည့်အဝသံမဏိကြိုးသုတ်အိတ်ကင်ရန်အတွက်ကန့်သတ်ထားသည့်ဝါယာကြိုးကွက်လေးမှာလှပပြီးသာယာလှပတဲ့အဆောက်အအုံများ Idealfork ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအရာများထဲတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခြင်း၊
ခိုင်ခံ့သောဖွဲ့စည်းပုံသတ္တုတွင်းအတွက်သံမဏိ Crimped ဝါယာကြိုးကွက် 304/316
အသေးစိတ်ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်ပစ္စည်း - သံမဏိ ၃၀၂ ၃၀၄ ၃၀၄ ၃၀ ၃၁၀ ၃၁၆ ၃၁၆ လီယက်အမျိုးအစား - ကတ္တီပါကြိုး - ၀ ယ်ပြီးနောက် - ၀.၇ မှ ၃၀ လက်မကွက်ပုံသဏ္:ာန် - ပတ် ၀ န်းကျင်၊ ကွေးကောက်၊ ကွေးခြင်းအသွင်အပြင်: အကြမ်းခံ။ ခိုင်ခံ့သောသံချေးတက်ခြင်း၊ ခိုင်ခံ့သောဖွဲ့စည်းပုံအသုံးချမှု - အသားကင်၊ ရေစစ်ခြင်းအရည် နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ဆောက်လုပ်ရေးမြင့်မားသောအလင်း - ကြိုတင် crimped ဝါယာကြိုးကွက်၊ သံမဏိ crimped wire mesh 304/316 သံမဏိ Crimped ဝါယာကြိုးကွက်နှင့်သတ္တုတွင်းများအတွက်အသုံးပြုမှုအတွက်ခိုင်ခံ့သောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အသုံးချခြင်း - Withb ...
ဆောက်လုပ်ရေးပူ - ငုံးသွပ်အကန့် Crimp ဝါယာကြိုးကွက်အမြင့်ဆန့
အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသောကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်ပစ္စည်း - သံမဏိဖြင့်သွပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိသွပ်အကျစ်ခံခြင်း - 50 g / m2 - ၃၀၀ ဂ / m2 စက်ရုံ - Yes အမျိုးအစား - ကတ္တီပါနီယာကြိုးဖြင့်ရက်လုပ်ခြင်း - ကြာရှည်ခံ။ ခိုင်ခံ့သောသံချေးမခံနိုင်သည့်အပြင်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအပလီကေးရှင်း - Barbecue၊ စိမ့်ဝင်နေသောအရည်နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ဆောက်လုပ်ရေး အမြင့်အလင်း: ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံအတွက်ပိတ်ထားသော Crimping နှင့်အတူသံမဏိ crimped ဝါယာကြိုးကွက်, သံမဏိ crimped ဝါယာကြိုးကွက်, ကြိုတင် crimped ဝါယာကြိုးကွက်, ဆောက်လုပ်ရေး Crimped ဝါယာကြိုးကွက်ကာဗွန်သံဝါယာကြိုး, galvaniz ...
Acid ခုခံအားစနစ် / သံမဏိကြိုတင် Crimped ဝါယာကြိုးခြံစည်းရိုး, SGS
အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသောကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်လျှောက်လွှာများ - အသားကင်၊ အစစ်ခံဓာတ်ငွေ့၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ - သွပ်ကြိုး၊ သံမဏိဝါယာကြိုးကွက် - ၀.၇ - ၂၁ လက်မစက်ရုံ - ဟုတ်ကဲ့အမျိုးအစား - ကတ္တီပါပစ္စည်ဖြင့်ရက်လုပ်ခြင်းထူးခြားချက် - အကြမ်းခံ။ ခိုင်ခံ့သောသံမဏိခံနိုင်ရည်၊ ကြိုတင် crimped ဝါယာကြိုးကွက်, သံမဏိ crimped ဝါယာကြိုးကွက် galvanized / သံမဏိကြိုတင် crimped ဝါယာကြိုးနှင့်အတူလုပ်မိုင်းဝါယာကြိုးကွက်အဘို့အပိုရှည်နှင့်အတူသတ္တုတွင်း / သံမဏိ Pre-Crimped ဝါယာကြိုးကွက်eနှင့်အတူလုပ်နိုင်ပါတယ် ...
၀ က်အစာကျွေးခြင်းအတွက်သံမဏိ / သွပ်သွင်းခြင်းခံထားရသောဝါယာကြိုးကွက်ထောင့်မှန်တံခါးဖွင့်ခြင်း
အသေးစိတ်ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်ပစ္စည်း - သံမဏိ / သွပ်သွင်းခြင်းဝါယာကြိုးအမျိုးအစား - ကတ္တီပါကြိုးပြီးနောက်ယက်လုပ်ခြင်း - ၀.၇ မှ ၃၀ လက်မပုံသဏ္:ာန် - စတုဂံ၊ ထောင့်မှန်စတုဂံပုံသဏ္:ာန် - အကြမ်းခံ။ ခိုင်ခံ့သောသံချေးတက်ခြင်း၊ ခိုင်ခံ့သောဖွဲ့စည်းပုံအသုံးချခြင်း - ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံ၊ ဝက်အစာကျွေးခြင်း၊ : lock crimp wire mesh၊ pre crimped wire mesh သံမဏိ / သွပ်ရည်စိမ်ထားသော crimped wire mesh ဝက်ကိုကျွေးမွေးရန်အတွက်ထောင့်မှန်တံခါးဖွင့်ဝက်သားကိုကျွေးမွေးရန်အကြီးစားအမျိုးအစား Crimped ကွက် Crimped ကွက်ကရူးနေတယ် ...
တာရှည်ခံသောရင်ပြင်ကန့်သတ်ထားသောဝါယာကြိုးကွက်၊ ကာဗွန်နိမ့်သံမဏိဝါယာကြိုး ၀.၇ မှ ၃၀ လက်မ
အသေးစိတ်ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်ပစ္စည်း - ကာဗွန်နိမ့်သံမဏိ၊ အမြင့်ကာဗွန်သံမဏိအမျိုးအစား: ပေါင်းစပ်ခြင်းပြီးနောက်ယက်ခြင်း၊ ရက်ကန်းစင်ပြီးနောက်ကတ္တီပါ - ၀.၇ မှ ၃၀ လက်မကွက်ပုံသဏ္:ာန် - ထောင့်မှန်စတုဂံ၊ ရင်ပြင်အသွင်အပြင်: အကြမ်းခံ။ ခိုင်ခံ့သောသံချေးမခံနိုင်ခြင်း၊ သတ္တုတွင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးမြင့်အလင်း - သော့ခတ် crimp ဝါယာကြိုး၊ သံမဏိ crimped ဝါယာကြိုးအနိမ့်ကာဗွန်သံမဏိဝါယာကြိုး Crimped ဝါယာကြိုးကွက်ရင်ပြင်များအတွက်သတ္တုတွင်း Crimped ကွက် squa ၏အဖွင့်ပုံစံများ ...
အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသောကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်မျက်နှာပြင် - သွပ်၊ ချည်သွပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသွပ်အဖုံး - ၅၀ ဂရမ် / ၂ မီတာ - ၂၈၀ ဂ / m2 ဖောက်သည်ပြုလုပ်ထားခြင်း - လက်ခံထားသည်အမျိုးအစား - ကတ္တီပါနီယက်ပြီးသောအခါအသွင်အပြင်: တောက်ပသောအရောင်၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကောင်း၊ တင်ပို့သည့်စံသတ်မှတ်ချက်အရ - Barbecue Grill Netting High Light: pre crimped wire ကွက်လပ်၊ သံမဏိကြိုးသွယ်တန်းထားသောကြိုးသွယ်တန်းထားသောကြိုတင်ကူသွင်းထားသောဝါယာကြိုးကွက်ထောင့်အပေါက်အတွင်းရှိဘာဘီကျူးကင်ကွန်ယက် Barbecue ကင်ပိုက်ကွန်သည်မျက်နှာပြင်ကိုသွပ်မိုးကာမျက်နှာပြင်ဖြင့်ကုသမှုဖြင့်ကြိုတင်ပိတ်ပင်ထားသည့်ဝါယာကြိုးအကာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသောကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်ပစ္စည်း - သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိသွပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသွပ်အကျီ - 50g / m2 - 300g / m2 စက်ရုံ: ဟုတ်ကဲ့အမျိုးအစား - Crimped wire နှင့်အတူယက်လုပ်ခြင်း - ဖွဲ့စည်းပုံခိုင်မာပြီးတာရှည်ခံသည်။ အသုံးပြုခြင်း။ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ရေနံဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းမြင့်မားသောအလင်း - သော့ခတ်ထားသောကတ္တီပါ၊ ဝါယာကြိုး၊ သံမဏိအကာအရံပြုလုပ်ထားသောသံမဏိသံမဏိကြိုးနှင့်ရေနံဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်တာရှည်ခံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အညီသံမဏိကိုယ်ထည်ကွက်၊ သံမဏိအကန့်များရှိသောသံကြိုးအဖြစ်လည်းသိနိုင်သည်။ ။
နူးညံ့သောသံမဏိဇင့် Barbecue SS304 Crimped Wire Mesh၊ Chrome Plated Wire Mesh
အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသောကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်မျက်နှာပြင် - သွပ်အကာ၊ ခရိုမီယမ်၊ SS304 သွပ်အဖုံး - ၅၀ ဂ / m2 - ၂၈၀ ဂ / m2 ဖောက်သည်ပြုလုပ်ထားခြင်း - လက်ခံထားသည်အမျိုးအစား - ကယောင်ပိတ်ပြီးနောက်ယက်လုပ်ခြင်းအသားအရေ - တောက်ပသောအရောင်၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ တင်ပို့မှုစံသတ်မှတ်ချက်အရ - Barbecue Grill Netting High Light: lock crimp ဝါယာကြိုး, သံမဏိ crimped ဝါယာကြိုးကွက်သွပ် Barbecue SS304 Crimped ဝါယာကြိုး, ခိုင်မာသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူနူးညံ့သောသံမဏိအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: ပစ္စည်း: Crimped သံဝါယာကြိုး netting.Finish: သွပ် coated ...
စက်မှုသံမဏိ Crimped ဝါယာကြိုးကွန်ဗင်းရှင်းပူပြင်းတဲ့သွပ်နှင့်အတူ
အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသောကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်ပစ္စည်း - သံမဏိပြားဖြင့်သွပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိသွပ်အဖုံး - ၅၀ ဂ / m2 - ၃၀၀ ဂ / မီတာစက်ရုံ - ဟုတ်တယ်အမျိုးအစား - ကတ္တီပါကြိုး - ကွမ်းယာခြင်း - တာရှည်ခံ၊ သံချေးတက်ခြင်း၊ ခိုင်ခံ့သောဖွဲ့စည်းပုံအသုံးချခြင်း - ကျောက်မီးသွေးသုံးစက်ရုံ၊ စစ်ထုတ်အရည်နှင့်ဓာတ်ငွေ့၊ ဆောက်လုပ်ရေး အမြင့်အလင်း: ကြိုတင် crimped ဝါယာကြိုးကွက်, သံမဏိ crimped ဝါယာကြိုးကွက်သံမဏိစက်မှုသံမဏိစက်မှုပူ crimped သံမဏိကြိုးနှင့်အတူ Crimped ဝါယာကြိုးကွက်ကာဗွန်သံဝါယာကြိုး, သွပ် galvanized သံမဏိ ...
Quarry မျက်နှာပြင်အတွက်ခိုင်ခံ့သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ Crimped သံမဏိယက်ဝါယာကြိုးကွက်
အသေးစိတ်ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်ပစ္စည်း - သံမဏိဝါယာကြိုးဖောက်သည်ပြုလုပ်ထားခြင်း - လက်ခံသည့်စက်ရုံ - ဟုတ်သည်အမျိုးအစား - ကတ္တီပါကြိုးဖြင့်ရက်ခြင်း - ကြာရှည်ခံ၊ သံချေးတက်ခြင်း၊ ခိုင်ခံ့သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအသုံးချမှု - ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံ၊ စစ်ထုတ်ရန်အရည်နှင့်ဓာတ်ငွေ့၊ ဆောက်လုပ်ရေးမြင့်မားသောအလင်း - သော့ခတ်ပလတ်စတစ်ကြိုး၊ ကြံ့ကြံ့ခံဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူကျောက်မီးသွေးမျက်နှာပြင်များအတွက်ကြိုတင် crimped ဝါယာကြိုးကွက်သံမဏိ Crimped ဝါယာကြိုးကွက် Crimped သံမဏိကွက် Pre-crimped ဝါယာကြိုးနဲ့လုပ်ရိုးရှင်းတဲ့ယက်လှိုင်းပုံသဏ္metalာန်သတ္တုမျက်နှာပြင်သည်။ သတ္တုဝါယာကြိုးသည် ...
filter ကို disc ကို, စက္ကူပုံနှိပ်ကွက်များအတွက် AISI304 နှင့် AISI316 သတ္တု ss ဝါယာကြိုးကွက်
အသေးစိတ်ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်ပစ္စည်း - သံမဏိ AISI 304, ၃၁၆ စက်ရုံ - Yes အမျိုးအစား - သံမဏိသံမဏိသံမဏိပိုက်ကွန်သွင်ပြင်လက္ခဏာ - တာရှည်ခံ၊ သံချေးတက်ပြီးခိုင်ခံ့သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံလျှောက်လွှာ - ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံ၊ အရည်နှင့်ဓာတ်ငွေ့စစ်ထုတ်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးမြင့်မားသောအလင်း - သော့ခတ်ထားသောကြိုးများ၊ ကြိုတင် crimped ဝါယာကြိုးကွက် AISI304 နှင့် filter ကို disc ကိုများအတွက် AISI316 သတ္တု ss ကိုဝါယာကြိုး ss ကိုဖော်ပြရန်, စက္ကူပုံနှိပ်ကွက်ဖော်ပြချက်: အသုံးပြုမှု: အက်ဆစ်နှင့်အယ်လကာလီပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဆန်ခါနှင့် filter ရန်။ သံမဏိဝါယာကြိုးကွက် ...